I-China Umkhombandlela wabaNtu abaDala ukuDibanisa iMibala ukuPrinta iNcwadi yokuThengisa kunye noMboneleli | Ushicilelo loLwazi
Igama lemveliso: ukuhanjiswa kwencwadi yokushicilela yabantu abadala
Isixhobo: iphepha elihlanganisiweyo, iphepha elingasasebenziyo kunye / okanye ibhodi egrey
Ukugqitywa kokugqitywa komhlaba: i-matte lamination
Ixabiso leyunithi: usd2-usd20
I-MOQ: Iikopi ezingama-500 ze-oda yesiko
I-1) Iincwadi ziyafumaneka kwangaphambili
Uya kufumana zonke iincwadi ozi-odayo kwangaphambili, endaweni yendlela yokuxabisa, apho iincwadi zingashicilelwanga de zithengiswe. Ke, oko kuthetha ukuba unokuba neekopi zezi ncwadi unokuzithengisa kubathengi abangaqinisekanga.
1) Utyalomali ngaphambi kokuthengisa ngaphambi kokuTyala
Xa besebenzisa iincwadi ezimfutshane ezimiselweyo, ababhali kufuneka baodole iincwadi ngaphambi kokuba zithengiswe. Oku kuthetha ukuba, ukuba incwadi ayithengisi, ukuthengwa kwasekuqaleni kunokuba yimfanelo enkulu.
2) Yenza ukhetho olululo
Iincwadi ezimfutshane ezishicilelweyo zihlala zisetyenziswa ngababhali bexesha lokuqala kunye nemibutho emincinci enokufunda okuncinci. Ilungile nakwiikopi zokufunda kwangaphambili kunye nohlelo olunomda. Le ndlela inika ukhetho olunobungozi obuncinci, ivumela iincwadi ngaphandle kokulandela okuphezulu ukuba zipapashwe kwaye zisetyenziswe ngababhali abaninzi abahlukeneyo.
I-United States yaseMelika, iCanada, iMexico, iOstreliya, iYurophu, uMzantsi mpuma weAsia, iRussia, iJapan, i-Middle East, i-Afrika, uMzantsi Melika, njl.
Nceda uqaphele ukuba asithengisi iincwadi ezigqityiweyo kunye nayiphi na isitokhwe. Sinikezela ngeenkonzo zokushicilela ngokubhukisha kwaye sifuna iifayile ze-vector zePD ukuze ziprintwe. Ukubonelela ngexabiso elifanelekileyo, kufuneka sazi ubungakanani bencwadi yakho, ubungakanani bamaphepha angaphakathi, umbala wekhava kunye nengaphakathi, njl.
Ubungakanani esishicilelayo rhoqo ngu-8.5 * 11inch, 8.5 * 5.5inch, 8.5 * 8.5inch, 8 * 8inch, 7 * 7inch, 6 * 9inch, njl.
Ukuba ukuprintwa kweencwadi zethuba elifutshane kuvakala ngathi kukhetho olufanelekileyo, okanye ukuba awukaqinisekanga ukuba yeyiphi na indlela, musa ukuthandabuza ukunxibelelana neBall Media Group. Inkampani yethu inamava abanzi okushicilelwa kweencwadi, kunye nezinye iinkonzo zeenkonzo zosasazo ezifana nemveliso yevidiyo kunye nophuhliso lwewebhu.
Sibe yingcali kwezona ndlela zibiza kakhulu zokuvelisa iincwadi ngoshicilelo lwexesha elifutshane kwaye siya konwaba kukunceda akunamsebenzi malunga nokuba manyathelo mani okwangoku. Nxibelelana nathi namhlanje!
Edlulileyo: Umdwebi wokuhombisa kwibhokisi yokuhombisa
Okulandelayo: Ukuprinta incwadi yokushicilela ukuze abantu baphumle